Ahịa nke Omnic Na-ewepụta Ndị Ọzọ Na-eguzosi Ike n'Ihe na Ndị Bara Uru | Martech Zone
Sdị ga-akwatu ntanetị na ntanetị na ntanetị iji nweta atụmanya ndị ahịa.
Dika ilu ochie si kwuo, Ebili mmiri na-eweli ụgbọ mmiri niile. Otu ụkpụrụ ahụ metụtara ahịa ndị ahịa dị irè. Mgbasa ozi mgbasa ozi siri ike nwere ike ịba ụba mmetụta nke ọrụ ahịa ndị ọzọ, site na ịbawanye weebụsaịtị gị yana ịchọ okporo ụzọ iji bulie mmekọrịta gị na mmekọrịta mmekọrịta na mmekọrịta ọha na eze.
Ndị ahịa ahịa savvy achọpụtala nke a ruo ọtụtụ afọ ma wepụta atụmatụ dị iche iche iji nweta uru ya. Agbanyeghị, ịhazigharị ihe okike gị n'ofe ọwa ezughi ezu. Na ngwa ngwa nke oge a, uber-nkeonwe, ebe ahia ọ bụla, ndị na-azụ ahịa na-eme mgbanwe ọhụrụ: omnichannel.
Oge obula, ebe obula, ntinye aka nke obula
Tụlee otu ndị ahịa na-esi etinye aka na ụdị taa. Imirikiti ndị America ka na-enuga na telivishọn, naanị ugbu a ọ bụ ya njikwa na otu aka na ama ma ọ bụ laptọọpụ na nke ọzọ. Anyị na-ede tweet, ederede, biputere, ọchụchọ, soro, nkata na ịzụ ahịa n'otu oge na mmemme anyị masịrị anyị. Otu ụdị ihe a dị adị na mmemme ụwa mgbe ndị na-eri ahịa gara na mgbere, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ma ọ bụ ndị na-eweta ọrụ.
Omume ndị ahịa agbanweela nke ukwuu n’ime afọ iri gara aga; ụdị ga-agbanwe. Ahụmahụ ugbu a na-agafe ọwa, ọnọdụ na ngwaọrụ, na-atụ anya na ụdị agaghị ama anyị, mana kwe ka anyị kwaga na-aga n'ihu, site na mgbasa ozi TV na weebụsaịtị, site na ịntanetị iji chekwaa, site na ngwa iji kpọọ oku, ihe niile ya na otu njiri mara nke onwe na oru.
Ndị ahịa Omnichannel nyefere uru karịa
Ọ bụ usoro dị ogologo, iji jide n'aka, ọkachasị mgbe ndị na-eme mkpọtụ ụlọ ọrụ setịpụrụ nnukwu mmanya maka ihe ọhụrụ na nkwekọrịta enweghị esemokwu. Otú ọ dị, ụgwọ ọrụ ya pụrụ ịba ụba. A na-adịbeghị anya Harvard Business Review ọmụmụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-ere ahịa mkpọsa 50,000 hụrụ ndị ahịa omnichannel-ndị na-etinye aka na ntanetị ma nke na-adịghị n'ịntanetị-bara uru karịa akara ahụ. Ha nọrọ karịa, ma n'ịntanetị ma na ụlọ ahịa, gara ebe ndị na-ere ahịa brik na-arụkarị ọtụtụ oge, na-akwụsi ike karị ma yikarịrị ka ha ga-atụ aro ụdị a.
Iji meziwanye njikọ gị, soro usoro kachasị mma:
Chepụta a ọwa-agnostic ahụmahụ. Kama ị na-eche maka ahụmịhe mkpanaka gị, ahụmịhe ụlọ ahịa gị na ahụmịhe desktọọpụ gị iche, gbanwee ọnọdụ gị. Chọpụta ihe ezigbo ntụpọ na ozi kwesịrị ịbụ, n'agbanyeghị ebe onye ahịa ruru gị aka. Ihe niile ị mere kwesịrị ịza ajụjụ a dị mfe: Kedụ ka ị ga - esi mee ka ndụ ndị na - eri gị dị nfe dị ka o kwere mee?
Gbarie nhazi nzukọ. Ahụmahụ omnishannel kachasị mma nwere ịdị mfe na isi ha. Ndị ahịa na-elele ntụpọ TV, na-ede koodu SMS iji duzie nkata n'ịntanetị wee kwaga n'enweghị nsogbu na usoro ụlọ ahịa, yana ọwa atọ a na-arụ ọrụ.
N'ikwu eziokwu, iru nhazi ahụ nwere ike ịchọ ugwu na-agagharị agagharị, ọkachasị mgbe ngalaba dị iche iche na-agba mbọ ịchịkwa. Ezigbo ahụmịhe omnichannel sitere na imekọ ihe ọnụ na mmekorita, yana data, sistemụ, okike, ndị ọrụ na onye ndu na nhazi. Ndị dijitalụ, ika, ọrụ na ụlọ ọrụ ụlọ ahịa ga-agarịrị karịa aka ike, oke ụlọ iji tinye ahụmịhe ndị ahịa mbụ.
Jiri nlezianya banyere gị data. Enweghị ụzọ gburugburu ya. Ọ na-ewe ọgaranya data ike njikọ aka omnichannel. Dịkwa ka usoro ndu gị, data gị ga-etinye ọnụ karịa oke nhazi. Nke ahụ pụtara ọdụ data na sistemụ nke nwere ike ịkwado echiche ogo 360 nke ndị ahịa gị ma kesaa mmekọrịta ndị ahịa, n'oge dị nso, n'agbanyeghị ngwaọrụ ma ọ bụ ọwa.
Tinye ụzọ ọzọ, onye ahịa gị ọ nwere ike ịrịọ sịnịma SMS ahụ egosipụtara na mgbasa ozi TV gị ma bulie ụgbọ ibu azụmahịa na ama ha? Ndi otu dijitalụ ahụ ọ ga-amata ya n'oge iji wepụta mgbasa ozi n'ịntanetị ma ọ bụ ozi ezubere iche n'echi ya? Ma mgbe onye zụrụ gị laghachiri n'ụgbọala ha ịzụta, oge a na laptọọpụ, ahụmịhe ahụ ga - emekọ ọnụ?
Kwado ọdịbendị ụlọ ọrụ gị na nke ezigbo nzukọ nzukọ na-ewe oge, mana usoro ọ bụla ịga n'ihu na-eme ka ị bịarukwu nso ịza ee.
Na-arụ ọrụ nke ọma, ọ bụghị isi ike. Mgbasa ozi omnichannel dị irè na-ewere usoro zuru oke: otu ebe mgbasa ozi, ihe okike na ntụgharị na-arụkọ ọrụ. Kpọtụrụ anyị na-atụle otú o nwere ike ịgbanwe gị ọzọ mgbasa ozi mgbasa ozi.
Tags: ahụmịhe nke ndị ahịaomnichannelnjikọ aka niile.online ahịaretailihuenyo nke abụọ